Spielwarenmesse eG inotora SPIEL: Messe anoramba ari muEssen - Spielpunkt - mitambo yebhodhi nemitambo yemavhidhiyo
Yakatumirwa ne Andre Volkman | Jan 10, 2022 | Mitambo yebhodhi nemakadhi, nhau, GAME muEssen, Nuremberg Toy Fair, Events
A bang: Spielwarenmesse eG inotora mazuva emutambo wepasi rose muEssen (SPIEL). Izvi zvakaziviswa naFriedhelm Merz Verlag naSpielwarenmesse eG. Chibvumirano chakatopera muna Ndira 1, 2022. Parizvino, hapana chichachinja kune vashanyi: iyo huru yekutengeserana yepasirese yemitambo yeparlor icharamba iri muEssen, varongi venguva refu kubva kuBonn, vachitungamirwa naDominique Metzler, vacharamba vachishanda.
Iyo SPIEL muEssen icharamba ichirongeka nemutungamiriri wenguva refu Dominique Metzler, asi chimwe chinhu chachinja maererano nevashandi: Florian Hess, CEO weSpielwarenmesse eG, ndiye akawedzera maneja maneja. Zviri mukati memeseji, zvisinei, hazvikanganwike: Spielwarenmesse eG yatora SPIEL muEssen uye ikozvino ndiye muridzi mutsva weruzhinji fair.
SPIEL muEssen: Nyaya refu
SPIEL inogona kutarisa kumashure kumakore anoda kusvika makumi mana enhoroondo: Kubva 40, chiitiko ichi chakatanga kubva padiki diki rekuungana kwevatambi kupinda mune yave ikozvino yakakura kwazvo pasirese yevatengi fair yebhodhi, kadhi nemitambo yekutamba. Sechinyakare mumatsutso, iyo nyika uye yepasirese mitambo mitsva inounzwa kune vakawanda vateereri muEssen mahoro ekuratidzira. Gore rega rega vanhu vanosvika zviuru mazana maviri vanoshanyira chiitiko ichi - nechimiro chepamusoro, kunze kwekunge zororo reCorona risingatariswe. Vekupedzisira vaive Mazuva emitambo yenyika muna Gumiguru 2021 pasaiti muEssen pasi pemamiriro edenda, gore risati raitwa varongi vaita fairi sechimiro chepamhepo. Kunyangwe Corona, vanopfuura zviuru makumi mapfumbamwe nevateveri vakaita rwendo kuenda ku "guta remitambo" republic.
"Zvakanga zvakakosha kwandiri kuti chimiro chakasarudzika cheSPIEL chichengetedzwe mune ramangwana," anodaro Dominique Metzler, uyo akabudirira kuwedzera nekutanga bhizinesi remhuri yake pamwe naRosemarie Geu mumakumi emakore apfuura. "NeSpielwarenmesse eG uye ruzivo rwayo nekutungamira nyika dzekutengeserana fairs, ndinofara zvikuru kuwana wandinofambidzana naye anoenderera mberi nekugadzira iyi yakabudirira yekutengeserana fair fair mukuda kwangu kwemakumi mashoma emakore anotevera. Ini nechikwata changu tiri kutarisira zvikuru kushanda pamwe chete. "
Denda iri rakawedzera kukurumbira kukurumbira kwemitambo yebhodhi. Muna 2020 musika wemitambo yeGerman wega wakakura ne21 muzana. Iwo maitiro anogonawo kuonekwa pane toy fair muchikamu cheB2B. Mutambo wepasi rose wekugadzira mutambo uchabatanidzwa mune yematoyi uye nzvimbo yemitambo ichasimbiswa zvakare. Iyo Nuremberg-yakavakirwa kambani inovimbisa kubata epasi rose mutambo mazuva SPIEL nekungwarira, asi seyakazvimiririra yekutengeserana fair inozochengetwa muchimiro chayo chepakutanga.
Semubatanidzwa, Spielwarenmesse eG iri kutoshanda "kubva kuindasitiri yeindasitiri". Vazhinji vaparidzi vemitambo vari pakati pemakambani enhengo. Sekuburitswa kwenhau, mutauriri webhodhi Christian Ulrich anosimbisa kuti: "Nemitambo yematoyi uye nemazuva emitambo yepasirese, tine pfungwa mbiri dzakasiyana, izvo, zvisinei, zvinopindirana uye nekudaro zvinogadzira kubatana. NeSPIEL tiri kuwedzera mabasa edu munzvimbo yemitambo pasina kushandura hunhu hunoenderana neiyo trade fair. "
Spielwarenmesse eG mupi webasa rekushambadzira kuindasitiri yematoyi pamwe nemurongi we “Spielwarenmesse International Toy Fair Nuremberg”, iyo hurusa yekutengeserana muindasitiri yematoyi. Makambani makumi mana nematanhatu akavamba cooperative yakanyoreswa kare muna 46 - nhasi kunosvika nhengo zana nemakumi mashanu dzinomhanyisa kambani. Iyo fomu yepamutemo inyanzvi muchikamu chekutengeserana.
SPIEL inofanira kuramba iri SPIEL
Christian Ulrich ndiye mutauriri webhodhi reSpielwarenmesse eG. Mufananidzo: Spielwarenmesse eG
Mamiriro ezvinhu echiitiko akakosha kune vashanyi.Izvi zvinofanirwa kuramba zvisina kushanduka panguva ino: Kuenderera mberi kunovimbiswa, zivisa avo vane chekuita - saka "vashanyi muEssen vanogonawo kuedza uye kutamba kune izvo mwoyo yavo mune ramangwana".
Sekureva kwevatambi, ichokwadi kuti iyo trade fair icharamba iri panzvimbo yayo yechinyakare muEssen. Kukurukurirana kunosimbisa kuti mutambo unofanirwa kuchengetedzwa sechiitiko chakazvimirira - mu "chimiro chepakutanga". Paakabvunzwa, Christian Ulrich, mutauriri webhodhi reSpielwarenmesse eG, akasimbisa kuti nhaurirano naMesse Essen dzakanga dzichiri kumirira, asi kuti vakanga vasingafariri "kuchinja nzvimbo yakabudirira yeSPIEL".
Danho rakazotungamira kuchibvumirano sezviri pachena rakabva kumativi ese, kunyangwe nemaitiro akasiyana. Mutauriri webhodhi, Ulrich, anotsanangura kuti: "Kambani yedu yanga iri pamba muindasitiri yematoyi kwemakore makumi manomwe uye timu yedu muNuremberg inozivisa zvakasimba nemisoro yakabatana uye zvigadzirwa. Patakanzwa kuti Amai Metzler vangada kuwana maonero enguva refu yeSPIEL, mavaizogara mubhodhi mubasa rekutungamirira, takakurumidza kubata. "
Mari yakayerera icharamba isina kutaurwa. "Takabvumirana kusataura mutengo wekutora," akadaro Ulrich.
Christian Ulrich ndewevatatu vakangotora zvinzvimbo zvavo kuSpielwarenmesse eG muzhizha regore rapfuura. Muna Chikunguru iye, Jens Pflüger naFlorian Hess vakatora kubva kunhengo dzebhodhi Ernst Kick (sachigaro) naHans-Juergen Richter. Florian Hess anoita semumwe maneja maneja wemazuva emitambo yenyika. PaSpielwarenmesse eG, nzvimbo yake yebasa ibasa re "Fair Management Board member", rinova basa rekutengeserana kwesangano uye kutengesa, sezvakataurwa muchiziviso chakaburitswa panguva iyoyo nezvekuchinja kwehofisi. Pakutanga, Hess aitarisira zviitiko zvevaratidziri kune ese mapurojekiti ekutengesa uye kuenderera mberi kwavo.
Iyo inotevera toy fair muNuremberg ichaitika kubva Kukadzi 2nd kusvika 6th, zvese zviri pasaiti uye neyakasungirirwa dhijitari fomati. Iyo SPIEL'22 muEssen yakarongerwa nguva kubva Gumiguru 6 kusvika 9th sekuvapo kwakanaka.
Asmodee | Fantasy Flight Games | Eldritch Horror | Basic game |... * 49,98 EUR tenga
Kare Star Wars: Outer Rim kuwedzera: chii chinogoneka?
Inotevera Nintendo Chinja: nhau dze2022
Iyo mhuri bhodhi mutambo Moto & Dombo rakaburitswa naPegasus Spiele
Alice: Asylum - American McGee Anozivisa Prequel yeVhidhiyo Game Series
Batman: The Animated Series Adventures - Mvuri weBat: Kickstarter board game campaign to launch soon
Tiny Tina's Wonderlands: mutambo wemitambo uye hunyanzvi miti mune turera